Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miomana amin'ny hetsika fizahan-tany feno fitsaharana tsy mijanona ao Singapaoro
Miomana amin'ny hetsika tsy miato amin'ny hetsika atao any Singapaoro amin'ity volana jolay ity! Io no tanjona faratampony any atsimo atsinanan'i Azia izay ivorian'ny fialam-boly fanatanjahantena sy fanatanjahantena iraisampirenena handrehitra ny filanao rehetra mikatsaka hetsika. Aza milalao na mijery fanatanjahan-tena fotsiny. Miezaha ho mpikatsaka hetsika ary manenjika ny adrenaline sy ny fientanam-po.
Araraoty ny lalao baolina kitra mivantana kilasy eran-tany rehefa ady an-tsakany sy an-davany ny lalao mavesatra eoropeanina amin'ny Lalao Beautiful Tompondaka Tompondaka Iraisampirenena Singapore (ICC) mandritra 26 - 30 Jul 2018 ao amin'ny National Stadium
Amin'ny maha tanàna tokana ao Azia-Pasifika handray ny Tompondaka Tompondaka Iraisam-pirenena, hahita ny ekipa mpilalao baolina kitra eropeana tsara indrindra ny ICC Singapore - Arsenal, Atlético de Madrid ary Paris Saint-Germain - miady amin'ny endrika robina robina amin'ny fotoana mahavariana Sports Hub.
Ny fiadiana ny amboara Tompondaka Iraisam-pirenena 2018 any Singapore dia hahita an'i Paris Saint-Germain, ekipa nahomby indrindra tamin'ny France niaraka tamin'ny amboara 36 tamin'ny anarany, nanao ny fitsidihany voalohany tao amin'ny fanjakan'ny tanàna. Raha nilalao tany Singapour tamin'ny taona 2015 sy 2013 i Arsenal sy Atlético de Madrid, dia samy hankafy ny fihaonana amin'ny tany tsy miandany avokoa ny Clubs roa tonta raha mbola manohy miady ho an'ny sokajy UEFA Champions League.
Manomboka amin'ny Alakamisy 26 Jolay, Atlético de Madrid dia hilalao an'i Arsenal amin'ny fihaonana andrasana indrindra aorian'ny ezaka mafy nataon'ny ekipa tany Eropa tamin'ity vanim-potoana ity. Ny tarika roa dia voasarika hilalao amin'ny lalao manasa-dalana amin'ny ligy Europa ary dingana iray manakaiky kokoa ny fahazoana ny tompondakan'i Champions UEFA amin'ny vanim-potoana manaraka. Na inona na inona valiny any Eropa, dia tsy isalasalana fa ho voasariky ny teknika asehon'ireo klioba roa ireo mpankafy rehefa mivory eto izy ireo.
Ny mpankafy dia afaka miaina ny fitiavany ary milentika amina hetsika marobe ao amin'ny House of Football and Fan Zone, na mifaly amin'ny repertoire ny safidin'ny fiainana alina any Clarke Quay, distrikan'ny fiainana amoron-dranomasina malaza indrindra any Singapore. Raiso ny tapakilanao now!
Ataovy izay tsy hatahoranao ny tahotrao ary reseo daholo izy ireo ao amin'ny Fear Factor Tour nataon'i Monster Day Tours
Miantsoantso ho an'ny adrenaline-junkies rehetra, fanamby ny tenanao ho an'ny sasany amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra tany Singapore tao anatin'ny fitsidihana iray! Atreho ny tahotrao ary tohero ny tenanao amin'ny hetsika toy ny aizim-pito mainty misakafo ao Fifanakalozan-kevitra ao amin'ny maizina, manandrana ireo sakafo matsiro “hafakely” any Singapour toy ny durian, ary mandray ny Reverse Bungy ao amin'ny Clarke Quay satria mampakatra anao amin'ny habakabaka alohan'ny hianjerananao sy hihodinanao eto an-tany.
Mipetipety ary mahatsapa ny fientanam-po amin'ny lalao farany an'ny Soccer Bubble
Miala voly miaraka amin'ny ankohonanao na ny sakaizanao? Mahazoa mifanaraka amin'ny bolongana inflatable goavambe ary mivonona amin'ny hetsika mahatsikaiky rehefa mianjera sy mifandona eny an-kianja ianao.
Miaina ny fientanam-po amin'ny familiana amin'ny fizarana ofisialy FORMULA 1 miaraka amin'ny Super Cars Ultimate Drive
Fanandramana azo antoka hahazoana ny pumping adrenaline anao - miditra ao amin'ny Ferrari na Lamborghini mahafinaritra, ary miaina ny fitaterana ireo fiara faran'izay mafy ireo eo amin'ny faritra FORMULA 1 ofisialy. Mandritra ny 60 minitra mampientam-po dia raiso ny fomba fijery tsara indrindra an'ireo distrikan'olom-pirenena sy afovoan'i Singapour ao ambadiky ny kodiaran'ny nofinofisinao!
Miala amin'ny làlana mahazatra miaraka amin'ny Fitsangatsanganana bisikileta Singapore ary manala sarona toerana malaza ara-kolotsaina any Singapaoro
Na bisikileta io na fanatodihana azy amin'ny e-scooter, miala sasatra rehefa mijery ireo trano ambony maoderina sy mari-toerana manan-tantara ao Singapore ianao. Miaina tahaka ny Singaporeana rehefa mijery ny làlana miafina ianao ary raiki-pitia amin'ity tanàna misy lafiny maro ity tsy mbola nisy toy izany! PS Aza adino ny manandrana an'i Singapore Kaya (Jamam-boanio mamy) toast sy atody nandrahoina atsy amin'ny fivarotana kafe manetriketrika, mandritra ny fitsidihanao.
Fahano ny fanahin'ny fianaranao amin'ny MegaZip
Raha atambatra ny hafainganam-pandeha sy ny fahafinaretana dia azonao atao ny manidina toy ny voromahery midina amin'ny tariby misy ny zorony atsimo atsinanana atsimo atsinanana (amboadia manidina) izay mirefy 450 metatra mankany amin'ny tendrony atsimon'ny tendrontany Azia. Mandrosoa amin'ny fijerena fatratra ny rano manjelanjelatra sy ny morontsiraka volamena ao amin'ny nosy Sentosa rehefa manidina eo amboniny ianao!
Midira any anaty ala ary alentika amin'ny dia mahasarika, rehefa avy hariva Lumina ala mando
Azia atsimo atsinanana traikefa an-tongotra tamin'ny haino aman-jery voalohany alina, Lumina ala mando mankalaza ny faha-45 taonan'ny Singapore Zooth tsingerintaona miaraka amin'ny dia lavitra mifandraika sy manaitra mampifangaro hazavana, feo ary tantara amin'ny alàlan'ny lalan'ny ala tropikaly milamina. Raiso ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny alina Zoo Singapore izay nahazo valisoa vokarin'ny vokatra maoderina amin'ny fotoana manintona izay tsy tianao hohadinoina!
Date: 1 Jul 2018 - 19 Feb 2019
Time: Isan'andro (7:30 hariva - 12 maraina)
toerana: 80 Mandai Lake Road, Singapore 729826
Momba ny Birao fizahan-tany any Singapour
Ny Singapore Tourism Board (STB) no maso ivoho fampandrosoana ho an'ny fizahan-tany, iray amin'ireo sehatra toekarena lehibe ao Singapore. Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria sy ny fiarahamonina dia mamolavola tontolon'ny fizahan-tany any Singapour izahay. Izahay dia mitondra ny Mety azo atao ny firehetam-po marika amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fanavahana an'i Singapaoro ho toeran-kaleha mamelombelona izay mitaona ny olona hizara sy hampitombo ny fitiavany. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana www.stb.gov.sg or www.visitsingapore.com na araho izahay ao amin'ny Twitter @STB_sg (https://twitter.com/stb_sg).